Igama lesiqhelo: amikacin
Igama lebrand: Amikin
Udidi lweziyobisi: Aminoglycosides
By Uhlaziyo lweMedia; Ukuhlaziywa ngu-Varixcare.cz. Igqityelwe ukuvuselelwa ngo-Disemba 1, 2020.
I-Amikacin yintsholongwane elwa neentsholongwane.
I-Amikacin isetyenziselwa ukunyanga izifo ezinobuzaza okanye ezinobuzaza.
I-Amikacin inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
Loluphi olona lwazi lubalulekileyo ekufuneka ndilwazi malunga ne-amikacin?
I-Amikacin inokwenzakalisa izintso zakho, kwaye inokubangela nokonzakala kwemithambo-luvo okanye ilahleko yokuva. ngakumbi ukuba unesifo sezintso okanye usebenzisa amanye amayeza.
Tshela ugqirha wakho ngazo zonke iimeko zonyango kunye nawo onke amayeza owasebenzisayo. Ukuba ufuna utyando, xelela ugqirha wotyando ngaphambi kwexesha ukuba usebenzisa i-amikacin.
Yintoni endifanele ndixoxe ngayo nomboneleli wam wezempilo ngaphambi kokusebenzisa i-amikacin?
Akufanele ulisebenzise eli yeza ukuba uxabisa i-amikacin okanye ii-antibiotics ezifanayo, ezinjenge-gentamicin, kanamycin, neomycin, paromomycin, streptomycin, okanye tobramycin.
Ukuqinisekisa ukuba i-amikacin ikhuselekile kuwe, xelela ugqirha wakho ukuba unayo:
i-asthma okanye i-allergies kwi-sulfites;
ukuphazamiseka kwemithambo-luvo; okanye
cr 5 -5
Ingqondo okanye ukuphazamiseka kwenkqubo ye-nervous efana nesifo sika-Parkinson.
Sukusebenzisa i-amikacin ukuba ukhulelwe. Ingamenzakalisa umntwana ongekazalwa. Sebenzisa indlela esebenzayo yolawulo lokuzalwa ukuthintela ukukhulelwa ngexesha lonyango.
Ayaziwa nokuba i-amikacin idlulela kubisi lwebele okanye ukuba inokwenzakalisa umntwana owanyayo. Akufanele uncelise ngelixa uthatha eli yeza.
Inikwa njani i-amikacin?
Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yakho kagqirha. Sukusebenzisa eli yeza ngesixa esikhulu okanye esincinci, okanye ixesha elide kunokuba kucetyisiwe. I-Amikacin inikwa ngokubanzi iintsuku ezi-7 ukuya kwezi-10.
I-Amikacin ingene kwi-muscle, okanye kwi-vein nge-IV. Banokukubonisa ukuba uyisebenzisa kanjani i-IV ekhaya. Musa ukulifaka eli yeza ukuba awuqinisekanga ukuba ulifaka njani inaliti kwaye ulahle iinaliti ezisetyenzisiweyo, i-IV tubing, kunye nezinye izinto ezisetyenziselwa ukunika iyeza.
Sukusebenzisa i-amikacin ukuba itshintshile umbala okanye inamasuntswana kuyo. Tsalela ikhemesti yakho iyeza elitsha.
Musa ukuxuba i-amikacin namanye amayeza kwisirinji okanye kwingxowa ye-IV.
Sebenzisa inaliti elahliweyo kunye nesirinji kube kanye. Landela nayiphi na imithetho yaseburhulumenteni okanye yendawo malunga nendlela yokulahla iinaliti kunye neesirinji. Sebenzisa isikhongozeli esibukhali (buza usokhemesti wakho malunga nendlela yokuyifumana kunye nendlela yokuyilahla). Gcina esi sikhongozeli kwindawo ekungenakufikelelwa kuyo ngabantwana nakwizilwanyana zasekhaya.
Sela amanzi amaninzi ngelixa usebenzisa i-amikacin. Oku kuya kunceda ukugcina izintso zakho zisebenza ngokufanelekileyo.
ukusilela ukukhula kubantu abadala
Ngelixa usebenzisa i-amikacin, unokufuna uvavanyo lwegazi okanye umchamo rhoqo. Ukuva kwakho, ukusebenza kwezintso, kunye nokusebenza kwentliziyo kunokufuna ukuvavanywa.
Sebenzisa eli yeza lonke ubude bexesha ugqirha akumisele lona. Iimpawu zakho zinokuphucula ngaphambi kokuba usulelo lunyangeke ngokupheleleyo. Ukutsiba iidosi nako kunokunyusa umngcipheko wosulelo oluya kuthi lukwazi ukumelana namayeza okubulala iintsholongwane. I-Amikacin ayizukunyanga usulelo lwentsholongwane njengomkhuhlane okanye ukubanda okuqhelekileyo.
Ukuba ufuna utyando, xelela ugqirha wotyando ngaphambi kwexesha ukuba usebenzisa i-amikacin.
Gcina eli yeza kubushushu begumbi kude nobushushu kunye nobushushu.
Fowunela ugqirha wakho ngemiyalelo ukuba uphose idosi ye-amikacin.
Yintoni endifanele ndiyiphephe ngelixa ndisebenzisa i-amikacin?
Amayeza okubulala iintsholongwane angabangela urhudo, olunokubonisa usulelo olutsha. Ukuba unorhudo olunamanzi okanye olunegazi, tsalela ugqirha wakho. Sukusebenzisa amayeza kurhudo ngaphandle kokuba ugqirha wakho ukuxelele njalo.
Zeziphi iziphumo ebezingalindelekanga ezinokubakho ze-amikacin?
Funa unyango olukhawulezileyo ukuba unayo iimpawu negazi lakho : imihlathi ubunzima bokuphefumla; ukudumba kobuso, imilebe, ulwimi, okanye umqala.
Shayela ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba unayo:
ukulahlekelwa kukuva, okanye isandi esibhongayo ezindlebeni zakho;
isiyezi kakhulu okanye eqhubekayo;
031 ipilisi engqukuva eluhlaza
iingxaki zezintso -ukuchama kancinci okanye ukungabikho kwaphela; intlungu okanye ubunzima bokuchama; ukudumba iinyawo zakho okanye amaqatha; ukuziva udiniwe okanye uphefumla kancinci;
ukuphefumla okubuthathaka okanye okungekho nzulu;
ukuphazamiseka okanye ukubetha;
ukuxhamla izihlunu okanye ukuxhuzula; okanye
iintlungu esiswini, urhudo olunamanzi okanye olunegazi.
iinyawo ezintle nezandla
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela i-amikacin?
I-Amikacin inokulimaza izintso zakho. Esi siphumo sonyuka xa usebenzisa amanye amayeza, kubandakanya: ii-antivirals, chemotherapy, intsholongwane yeyeza, amayeza okuphazamiseka kwamathumbu, amayeza okuthintela ukwaliwa komzimba, amayeza atofwayo ukunyanga i-osteoporosis, kunye namanye amayeza eentlungu okanye iintlungu. , Tylenol, Advil, kunye no-Aleve).
Tshela ugqirha wakho malunga nawo onke amayeza owasebenzisayo, kwaye nawuphina uqale okanye uyeke ukusebenzisa, ngakumbi:
idiuretic okanye 'ipilisi yamanzi';
nayiphi na enye i-antibiotics.
Olu luhlu alugqitywanga. Amanye amachiza anokusebenzisana ne-amikacin, kubandakanya amayeza kunye neyeza zokuthenga, iivithamini kunye neemveliso zamayeza. Ayilulo lonke unxibelelwano olunokwenzeka oluluhlu kwesi sikhokelo sonyango.
Ugqirha wakho okanye usokhemesti unokubonelela ngolwazi oluthe kratya malunga ne-amikacin.
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 2.02.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-metformin er
Zithini iipilisi zemollys
yintoni i-hyoscyamine 0.125mg esetyenziselwa
prednisone 20 mg yeyantoni
I-citalopram hbr 20mg yeziphumo ebezingalindelekanga